Nzọ na kaadị cardigans ndị a kpara akpa iji mepụta uwe ndị na-adịghị mma | Bezzia
Maria onyekwere | 05/04/2021 18:00 | Kedu ihe m ga-eyi, Ụdị
Have nwere ihe n'ụlọ nke ị na-eyighị uwe kemgbe ọtụtụ iri afọ? Oge eruola rummage site na ndị a iji nye ndị ahụ ohere ejiri aka kee cardigans na anyị niile nwere ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ anyị niile bụ ndị dị mkpa afọ.
Ọ bụrụ na ị nwere nke ọ bụla, ị nọ n'udo! Nwere ike ịmepụta ụdị mmanya Na-ewu ewu ma nye ndụ nke abụọ na uwe ahụ. Ọ bụ na ị gaghị edebe ihe? Echegbula onwe gị, ị gaghị enwe nsogbu ịchọta otu nke masịrị gị na nchịkọta ejiji ugbu a n'ihi na, dị ka anyị kwupụtara ọnwa ole na ole gara aga, ha bụ otu n'ime ọnọdụ nke oge a.
Site na imepe emepe, okooko osisi ndị a kpara akpa, Mbipụta a na-enyocha ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị iche. Ihe ndị na-eme ka cardigans ndị na-adọrọ adọrọ na-agụpụta na-ewu oge a. Ma dị ka ihe na-ewu ewu, ị nwere ike ịchọta ha na nchịkọta nke ụlọ ọrụ ejiji dịka Zara, Mango ma ọ bụ Asos.
Na agba na-anọpụ iche ma ọ bụ ndo dị nro pastel Ha ga-enwe oke ọrụ na uwe nke oge opupu ihe ubi-oge ọkọchị 2021. Ma ọ gaghị adị mkpa iji mejupụta iji jikọta ha na ndị a. N'ezie, ijikọta ha na jeans bụ nhọrọ kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-ede instagram.
Echiche iji jikọta ha
Otu akwa jeans na cardigan, ị gaghị achọkwu mmiri a. Mecha ọdịdị ahụ na Mary Janes ma ọ bụ T-Bar-ụdị akpụkpọ ụkwụ dị ala na nkata aka, dị ka Louisa Durrell ga-eme, ị ga-enweta ọdịdị vintage nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke zuru oke maka iji ya kwa ụbọchị.
Cardigans nwere asatọ ma ọ bụ mepee emepe na ụda na-anọpụ iche dịkwa mma iyi n'elu akwa ma ọ bụ n'elu nwere mbipụta ifuru. Ma oburu na ichoro uzo ndi nwere ike ime mmụọ nke iri asaa, ị ga-aga naanị obere uwe mwụda na cardigan dabara adaba, ị ga-anwa anwa?
Na mgbakwunye na inyere gị aka ịmepụta mkpụrụ vaịn nke oge a, ndị cardigans ndị a enweghị olu na bọtịnụ n'ihu Ha ga-enyere gị aka ma oge ọkọchị ruo. Anyị ji n’aka na ị ga-enweta ọtụtụ ihe na ha karịa ka ị chere. You na-esonye n’omume ahụ?
Onyonyo - @IGIHE, @maralafontan, @lolo_bravoo, @chukwunyere, @elliiallii, chukwunyere, @mirenalos, @IGIHE, @nwanyi_ocha
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Fọọ na cardigans ejiri kpuchie uwe ndị ochie